WATCH: Netflix's 'Fear Street Trilogy' Trailer Inoisa Kutya Kumberi uye Center
musha Horror Varaidzo Nhau WATCH: Netflix's 'Fear Street Trilogy' Trailer Inoisa Kutya Kumberi uye Center
by Waylon Jordan June 9, 2021 2,012 maonero
Tine isingasviki mwedzi kusvika Netflix's Ityai Mugwagwa Trilogy debuts, uye chikuva chekutepfenyura chakadonhedza mutsva mutrailer nhasi kutipa zvakadzama kuona zvishoma zvezvinhu zvitsva zvavanotarisira!
Iyo trilogy yemafirimu ichaburitsa imwe pavhiki kutanga muna Chikunguru 2, 2021 uye ichaitika muna 1994, 1978, na1666. Mutsara wemumafirimu unoti:
Muna 1994, boka revachiri kuyaruka rinowana kuti zviitiko zvinotyisa zvakatambudza dhorobha ravo kwezvizvarwa zvese zvinogona kunge zvakabatana - uye kuti vanogona kunge vari vavariro inotevera. Zvichienderana neRL Stine yakanyanya kutengesa inotyisa nhevedzano, Yekutya Street inotevera husiku husiku kuburikidza neShadyside yakaipa nhoroondo.
The Ityai Mugwagwa mabhuku akatanga kutsikisa muna 1989. Kwakanga kuri kungwara kwekufamba pane chikamu cheRL Stine, kutarisira kuti vateereri vake vaikura uye kuti vaizoda mabhuku akakura navo. Matanda acho aive akakwirira mumabhuku aya, uye kunyangwe paine vakafa vashoma mu Goosebumps mabhuku, izvo zvaakaratidza mukati Ityai Mugwagwa yakanga yakanyanya kuwedzera.
Iwo akateedzana akatengesa anopfuura mamirioni makumi masere emakopi pasirese kusvika zvino uye anosara, kune vamwe vanotyisa vateveri, yavo gedhi kupinda mumhando yacho.
Iyo turera nyowani yakanyanyisa, ichipa nyaya inosvetuka kuburikidza nenguva ine mhedzisiro inotyisa. Tarisa uone pazasi, uye utiudze kana iwe uchinge uchiona Ityai Mugwagwa painotanga paNetflix muna Chikunguru 9, 2021!